Assalamu Calaykum Wr Wb.
Waxaan walaalaha Somaliyeed ee ku nool Boston iyo Nawaaxigeeda lagu wargalinayaa in Dhamaadka bishaan November uu dhacayo Mutamarkii 8-aad ee markazka Boston Islamic center uu marti galin jiray.
Waxaan walaalaha Somaliyeed ee ku nool Boston iyo Nawaaxigeeda in Dhamaadka bishaan November uu dhacayo Mutamarkii 8-aad ee markazka Boston Islamic center oo marti galin jiray. Mutamarka oo dhici doona maamaha kala ah 27, 28 iyo 29-ka ayaa waxaa kasoo qayb galaya galay culimo kala duwan ay kamid yihiin Sheikh Abdirahman Sheikh Cumar, Sheikh Mahbuub Mohamed iyo Abdulbury Yahay, iyo sidoo kale culimadeena goballada New England.
Mutamarka sanadkaan ayaa waxaa loogu magac daray (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) Waxaana looga hadli doonaa dhamaan mawduucyada kahadlaya isku haynta bulshada iyo waxyaalaha dhaawacaya. sidoo kale Mutamarku wuxuu yeelan doonaa barnaamijyo xiiso badan oo ay kamid yihiin Muxaadarooyin somali iyo English ah, Tartamo Quraan, anaashiidyo, sports iyo kuwo kale oo badan.
Mutamarku wuxuu ka dhici doonaa dugsiga sare ee English High school oo aan horay labadii sano ee lasoo dhaafay aan ugu qabannay. fadlan gaarsii dhamaan asxaabtaada, qaraabadaada iyo dhamaan inta aad wanaaga iyo khayrka aad lajaceshahay.
Hoos ka arag Flyerka Mutamarka,